पानीकै अभाव छ कसरी धोइरहने हात ? – NawalpurTimes.com
२०७८ असोज ६ गते
Wed, 22 Sep, 2021
पानीकै अभाव छ कसरी धोइरहने हात ?
प्रकाशित : २०७६ चैत २५ गते ११:२४
एजेन्सी । पछिल्ला केही महिनामा हामीले सबैतिर बारम्बार सुन्दै आएका छौँ– “साबुन पानीले नियमित हात धोइरहनुपर्छ ।” अझ विश्व स्वास्थ्य संगठनले त कम्तिमा पनि २० सेकेन्ड मज्जाले धोइरहन सुझाव दिएको छ । अहिले किटाणुको संक्रमणविरुद्ध लड्न यही तरिका सबैभन्दा उपयुक्त हुने भनिएको छ । तर चिकित्सकहरुले भनेअनुसार गर्ने हो भने हरेकचोटी हात धुँदा औसतमा पनि २ लिटर पानी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रतिव्यक्ति दैनिक १५ देखि २० लिटर हात धुनमै खर्च गर्न सक्ने, पानी आफूहरुसँग नभएको वाटर इनिसिएटिभ ओडिसा (भारत)का कन्भर्नर रन्जन पाण्डे बताउँछन् । यसरी विश्वका २.२ अर्ब मानिसहरु अहिले खानेपानीबाट वञ्चित छन् भने हात धुने पानीको त कुरै नगरौँ । विशेषगरी कम र मध्यम आय भएका देशहरुमा पानीको चरम अभाव रहेको हुँदा कोरोनाविरुद्ध हात धुनु उनीहरुका लागि अर्को ठुलो युद्धसमान अवस्था बनेको छ ।
खडेरी, जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित प्रणालीलगायत विभिन्न कारणले यी देशहरुमा पानीको अभाव हुने गरेको छ । यस्तोमा साबुन पानीले हात धोइरहनुले कोरोनासँग लड्नमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने चिकित्सकहरुले धेरैपटक बताइसके पनि त्यहाँका नागरिकहरुका लागि बारम्बार हात धुनु लक्जरी समान कुरा बन्न पुगेको छ ।
यसमा पनि हात धुँदा खानेपानी समान सफा र बगिरहेको धारामा धुन भनिएको छ जसपछि मात्र किटाणु पखालिन्छ । तर गरिबहरुका लागि त्यसरी हात धुनु धेरै महङ्गो र दिर्गकालीन रुपमा सम्भव छैन । यस्तोमा सार्वजनिक स्थलमा हात धुने ठाउँ निर्माण गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुने बताइएको छ । जस्तै २०१४ मा इबोला भाइरस प्रकोपका बेला पश्चिम अफ्रिकामा ठाउँठाउँमा हात धुने ठाउँ बनाइएको थियो ।
सरसफाइ र पानीको अभाव त्यसबेला सबैका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको थियो । त्यो समय अफ्रिकाका अविकसित क्षेत्रमा यो समस्याको समाधान असम्भव ठानिएको थियो ।
यस्तोमा क्लोरिनको प्रयोग सबैभन्दा प्रभावकारी साबित भयो । क्लोरिनले धेरै किटाणुहरु मार्ने हुँदा हात धुने पानीमा यसको प्रयोग गरिएको थियो । यसरी यी मुलुकहरुमा अहिलेका अति प्रभावित क्षेत्र जसरी साबुनको कुनै कमी छैन तर पानी पाउन चाहिँ उनीहरुले ठूलै संघर्ष गर्नुपर्छ । भारतको कर्नाटकमा बस्ने ५२ वर्षीया यशोदा आफ्ना पति, चार छोराछोरी, कुकुर, बिरालो र एउटा कुखुरा पालेर १५० वर्ष पुरानो पुर्ख्यौली घरमा बसेकी छन् ।
उनको घर समुद्रबाट ५०० मिटर टाढा छ र इनारमा आउने पानी नुनीलो भएकाले उनी सरकारले दिनमा दुईपटक दिने गरेको ड्रमको पानीमा निर्भर छन् । तर त्यो पानी सरकारले भने जसरी नियमित आपूर्ति नहुँदा कतिपय अवस्थामा उनी हप्तौँ बिनापानीको गुजारा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा उनले छरछिमेक र साथीकहाँ गइ पानी मागेर ल्याउने गरेको बताउँछिन् ।
यसरी भारतमा मात्र ८ करोड बढी मानिसहरुले पानीको चरम अभावमा बाँचिरहनु परेको छ । विशेषगरी ६ देखि ८ जनासम्मको ठूलो परिवारका लागि पानीको दैनिक उपभोग धेरै सीमित गराउनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् राम्ररी हात धुने हो भने पाँचजनाको परिवारलाई मात्र दिनमा १०० लिटर आवश्यक पर्छ जुन उनीहरुका लागि केबल सपनासरह हुन्छ ।
सांसदका प्रत्यासी र नगर प्रमुख राखेर मध्यबिन्दुमा भण्डारीको प्यानल घोषणा
काठमाडौँ कांग्रेसको वडा अधिवेशन सम्पन्न
डा.नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बन्दै
ओली सरकारले नियुक्त गरेका सबै राजदूतलाई बोलाइयो फिर्ता
हेटौडा-बर्दघाट २२० केभी पिडितको गुनासोः बिकासका नाम बिस्थापित पार्न खोजियो
दुई महिनाभित्र होङ्सी सिमेन्टलाई विद्युत् दिइने
ठेक्काको समय सिमा सकिने बेला सम्म पनि टालटुलमै अल्झिदै चाईना स्टेट करपोरेसन
विश्व अल्जाइमर्स दिवस: विस्मृतिसँग ठूलीको संघर्ष !!